महावीर पुन – नेपाली मन्दिर बनाउन पैसा खर्च गर्छन् तर आविष्कारमा खर्च गर्दैनन् – Nepali Update
महावीर पुन – नेपाली मन्दिर बनाउन पैसा खर्च गर्छन् तर आविष्कारमा खर्च गर्दैनन्
म्याग्दीको विकट गाउँ नाङ्दीमा जन्मेका महावीर पुनले अमेरिकाको नेब्रास्का विश्वविद्यालयबाट विज्ञान विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका हुन् । झण्डै २५ वर्ष विद्यालय शिक्षकका रुपमा काम गरेका पुनले ७ वर्षअघि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना गरेका थिए । वायरलेस प्रविधिको प्रयोग गरेर गाउँगाउँमा इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याएबापत् एसियाको नोबेल पुरस्कारका रुपमा लिइने म्यागासेसे पुरस्कारबाट सम्मानित पुनले शुरु गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अहिले नयाँ नयाँ आविष्कारको काम गरिरहेको छ ।
जुन पुरस्कार उनले आविष्कार केन्द्रका लागि पैसा जुटाउनका लागि बेच्ने तयारीसमेत गरेका छन् । मुनाफारहित संस्थाका रुपमा रहेको आविष्कार केन्द्रको शुरुवात गरेका पुनले काठमाडौँको किर्तिपुरमा केन्द्रको कार्यालय सञ्चालन गरेका छन् । नयाँ पुस्ताका लागि रोलमोडेल र आविष्कार केन्द्रको संस्थापक अध्यक्षमा रुपमा काम शुरु गरेका उनै पुनसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं । प्रश्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश–
म्याग्दीको नाङ्गी गाउँमा जन्मेर नेब्रास्का विश्वविद्यालयमा पढ्नुभयो, पारिवारीक अबस्था बताइदिनुस् न ? कसरी यो स्थानसम्म पुग्नुभयो ? “मनुष्यको चोला लिएर जन्मिएपछि चोला भयो, मरेपछि गयो । मानिस जन्मेपछि विभिन्न अबस्थाबाट गुज्रीनुपर्ने हुन्छ । संसारमा रहेका सबै जीवजन्तुहरुको एउटाको अर्कोसँग मिल्दैन, जहाँसम्म मेरो कुरा छ, सयौ मोडहरु पार गरिसके । धेरै मोडहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ । जीवनमा मोडहरु आएपछि नमोडिइ सुखै छैन । तपाईले भनेजस्तै म दुर्गमा गाउँमा हुर्केको मान्छे । म अहिले धेरै स्कूलहरुमा विद्यार्थीहरुसँग अन्तरक्रियाका लागि गइरहेको हुन्छु ।
कति वर्षको उमेरमा विद्यालय जान थाल्नुभयो ?
के पढ्नुभयो पाठ्यपुस्तक नै नभएपछि ?
पिताजीहरु लाहुरतिर हुनुहुन्थ्यो कि गाउँमै नि त्यो बेलामा ?
वुवा पेन्सनमा आइसक्नुभएको थियो । त्यहाँमात्रै होइन, नेपालको पहाडी क्षेत्रमा पढाउने भन्ने चलन थियो । जुन २०२० सालभन्दा अघिको कुरा हो । तर मेरो बुबामात्रै कहाँबाट कसरी सोच्नुभयो थाहा छैन, उहाँले चाँहि मलाई हाइस्कूल पढाउन चितवन ल्याउनुभयो । म्याग्दीका केही मान्छेहरु चितवन बसाइसराई गरेका थिए । त्यसैकारणले मलाई चितवन ल्याउनुभएको थियो । कक्षा ९ मा भर्ना हुँदा मैले पहिलोपटक चप्पल लगाएको हो । मैलेमात्रै होइन, नेपालको अधिकांश क्षेत्रका मानिसले त्योबेलामा जुत्ताचप्पल लगाउँदैन थिए । उतिवेला शुरु गरेको चौरी पाल्ने, माछा पाल्ने, नेपाली हातेकागज बनाउने, जाम बनाउने, मौरी पाल्ने, चीज बनाउने, पर्यटनको लागि लजहरु खोल्ने लगाएतका कामहरु शुरु गरेँ । जुन अहिलेसम्म पनि सफलता पनि पाइरहेको छ ।
के चिजले तपाईलाई ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउने योजना बनाउनुभयो त ?
त्यसकालागि साधन स्रोत र जनशक्ति कसरी जुटाउनुभयो ?
सरकारले सहयोग गर्दैन भन्ने कसरी लाग्यो, नेपालमा एनजिओ आइएनजिओको भुमिका कस्तो लाग्यो ?
–गैरसरकारी संस्थाको धेरै आलोचना हुने गरेको छ, तपाईको अनुभव कस्तो लाग्यो ?
– जुन अबस्थामा नेपाल छ, तपाई तल्लो तहबाट आएर क्रियाशिल भइरहनुभएको छ । एउटा समुदायलक्षित भएर काम गरिरहनुभएको छ । केही सम्भावनाहरु पनि छ कि समस्या मात्रै छ ? हैन, जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ सम्भावनाहरु पनि हुनेगर्छ । समस्या नहुने ठाउँमा सम्भावना कम हुन्छ । नेपालजस्तो गरीब देशमा सम्भावना प्रचुर मात्रामा भएको देश हो । तर त्यो सम्भावनालाई ग्रहण गर्नसक्नुपर्‍यो ।
तर गलत राजनीतिक प्रवृत्ति र परम्परागत कर्मचारी संयन्त्र छ कसरी सम्भव होला र ?
तपाईलाई चाँहि नेपालको राजनीतिले आकर्षण गर्न सकेन ?
देशलाई समृद्ध बनाउन राम्रो राजनीति चाहिन्छ तर नेपालको मामिलामा त्यो हिसाबले चलेको छैन । “कुनै समयमा राजनीतिमा पनि सोच राख्नुहन्छ कि ? हुन त तपाई योजनामा विश्वाश नगर्ने भनेर भनिसक्नुभयो ? मैले प्रष्टसँग भन्ने चाँहि के हो भने, नेपालको राजनीति जुन हिसाबले चलेको छ, संस्कार नै कस्तो भयो भने परिवार व्यक्ति र समूहका लागि राजनीति भन्ने भइरहेको छ ।
यसका लागि जुन प्रविधि, प्राविधक दक्ष जनशक्ति के के तपाईको प्राथमिकतामा पर्छ र तपाई कसरी जुटाउनुहुन्छ ?
कस्तो छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको प्रारम्भिक अबस्था ?
महावीर पुन भनेको आफुसँग पैसा पनि नभएको र वैज्ञानिक नभएको भनेर धेरै पिएचडी होल्डरहरुले भनेको सुनेको छु । मैले भने गरेको छु– कसैको पनि संस्कार छैन, नेपालमा केन्द्र कसैले पनि नचलाएका कारण कसैलाई पनि थाहा छैन । मैले पनि अमेरिकामा पुगेर विश्वविद्यालय शिक्षा पढेर आएको हो । मैले पनि कुनै विश्वविद्यालयको काम गरेर त आएको हैन । तर हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थिती कस्तो छ भने काम गर्ने सिक्दै जाने हो । सिक्नका लागि समय लाग्छ । अहिले हामीले गरिरहेको काम भनेको मकैको गेडा रोपेका छौँ । त्यो गेडा उम्रियो । अहिले २/४ वटा पातहरु पलाएको छ ।
ग्रामिण क्षेत्रमा तपाईले जुन कामको शुरुवात गर्नुभएको थियो, त्यो अहिले पनि चलिरहेको छ ?
अनि कसरी हुन्छ त देश समृद्ध ?
त्यसका लागि मान्छेहरु पनि चाहिए । दिमाग भएको मान्छेहरु राख्नका लागि ठाउँ त चाहियो, त्यो आविष्कार केन्द्र हो । अहिले नेपालमा कसैलाई केही नयाँ आयडिया आयो भने कहाँ गएर बनाउने कुनै ठाउँ छैन । सरकारी र गैरसरकारी तवरमा कुनैपनि स्थान छैन । आविष्कार केन्द्र त उदाहरणका लागि मात्रै गरिएको हो, देशैभर यस्ता केन्द्र हुनुपर्छ । सबै पुरस्कार बेचिसकेको छु । त्यही भएर अहिले मैले सबैलाई थर्काउँछु, पुरस्कार नदेउ दियौ भने मैले बेच्दिन्छु भनेर । म्यागासेसे पुरस्कार पनि २ वर्षदेखि बेच्नका लागि राखेको छु । त्यो पैसा आविस्कारका लागि प्रयोग गर्नका लागि हुन्छ भनेर त्यो गरेको हो ।
तपाईको केन्द्रमा केही नयाँ पुस्ताका मान्छेहरु आएका छन् त आविस्कार गर्छु भनेर ?
मैले कुनै काम गरेर धेरै पैसा कमाए भने कार किनौला २/४ वटा, आलिसान घर बनाउँला । तर संसारको सबैभन्दा राम्रो होटेलमा पनि बसेको छु, जेट प्लेन पनि चढेको छु, मिठोमिठो चिज पनि खाएको हो । त्यसकारणले अनुभव लिइसकेको छु संसारको सबै सुबिधाको । सबै कुरा भोगेका कारण म आफैले आफैलाई भारी बनाउन नचाहेको हो । सकेसम्म हलुङ्गो भएर हिड्न खोजेको हो । मैले अस्ती पनि भने धेरै पुरस्कार नदेउ भनेको कारण पनि त्यही हो ।
म्यागासेसे पुरस्कारप्रति तपाईको धारणा चाँहि के छ नि ?
तपाईलाई थाहा छ कि छैन, मैले पाएको सबै पुरस्कार बेच्न भनेर अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोमा केटाहरुलाई बेच्न भनेको छु । सबै पुरस्कार बेचिसकेको छु । त्यही भएर अहिले मैले सबैलाई थर्काउँछु, पुरस्कार नदेउ दियौ भने मैले बेच्दिन्छु भनेर । म्यागासेसे पुरस्कार पनि २ वर्षदेखि बेच्नका लागि राखेको छु । त्यो पैसा आविस्कारका लागि प्रयोग गर्नका लागि हुन्छ भनेर त्यो गरेको हो ।–